မြန်မာနိုင်ငံ ဝင်လာသူအားလုံးကို ၁၄ ရက်စောင့်ကြည့်မယ်
မြန်မာနိုင်ငံ ဝင်လာသူအားလုံးကို ၁၄ ရက်စောင့်ကြည့်မ...
25 มี.ค. 2563 - 22:12 น.
မြန်မာကိုလာရောက်မယ့် ခရီးသွားတွေအပေါ် ထပ်တိုးကန့်သတ်ချက်တွေထုတ်
မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့ ည ၁၂ နာရီ က စတင်သတ်မှတ်မယ့် ဒီအစီစဉ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ဝင်လာမယ့်သူတွေ ထဲက မြန်မာနိုင်ငံ သားအားလုံးကို ၁၄ ရက်စောင့်ကြည့် သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ နိုင်ငံခြားသားတွေကိုတော့ ၇၂ နာရီ သုံးရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကင်းရှင်းကြောင်း အထောက်အထားပြောဖို့ လိုမှာဖြစ်သလို့ သူတို့ကိုလည်း ၁၄ ရက်စောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ပါပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ ဗြိတိန်၊ နယ်သာလန်၊ သြစတီးယား၊ ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ နော်ဝေ၊ ဆွီဒင်နဲ့ ဒိန်းမတ်တို့ က လာတဲ့သူတွေကို ၁၄ ရက်စောင့်ကြည့်မယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး မတ်လ ၁၅ ရက်ကစလို့ ကိုရီးယား၊ တရုတ်၊ အီတလီ၊ အီရန်၊ ပြင်သစ်၊ စပိန်နဲ့ ဂျာမနီ စတဲ့ ခုနစ်နိုင်ငံက လာသူတွေကို ပြည်ဝင်ခွင့်ကန့်သတ်ချက်တွေ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို လုပ်ရတာဟာ နိုင်ငံ အသီးသီးက လာရောက်တဲ့ ခရီးသည်တွေက တစ်ဆင့် မြန်မာပြည်သူတွေပေါ် ကျရောက်နိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ကို ထိန်းချုပ် ကန့်သတ်နိုင်ဖို့ အခုလို ဆောင်ရွှက် ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်း ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အမေရိကန်၊ ဗြိတိန်အပါအဝင် နိုင်ငံတချို့ကို ပြည်ဝင်ခွင့် မြန်မာ ထပ်မံကန့်သတ်
အင်္ဂလန် ကနေ ပြန်လာတဲ့သူ နှစ်ဉီးမှာ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ့
သူဟာမတ်လ ၂၁ ရက်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံ ကနေ တစ်ဆင့်မြန်မာနိုင်ငံ ကိုဝင်ရောက်လာသူဖြစ်ပေမယ့် အစိုးရရဲ့ စောင့်ကြည့်တဲ့ အစီစဉ် မှာ မပါပဲ လွတ်လာသူဖြစ်ပါတယ်
အင်းစိန်တောင်သူကုန်း နေထိုင်တဲ့ဒီအမျိုးသားဟာ ကိုယ်ပူဖျားနာတာ နဲ့ ချောင်းဆိုးရောဂါလက္ခဏာတွေ ကြောင့်မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့မှာ အင်းစိန်ပြည်သူ့ဆေးရုံ မှာ စောင့်ကြည့်လူနာအဖြစ် သီးသန့်ခန်းထားရှိ(isolation) စောင့်ကြပ်ကုသမှု ခံယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
အခုသူနေထိုင်တဲ့ လမ်းကို ပိတ်ထားပြီးတော့ မိသားစုဝင်တွေကို စောင့်ကြည့်နေကြောင်းနဲ့ သူသွားခဲ့တဲ့ ဘုရားရှိခိုးကြောင်းကိုလည်းပိတ်ထားကြောင်း အင်းစိန်တောင်သူကုန်းနေထိုင်သူ မဆာရာကပြောပါတယ်။
ကိုဗစ်-၁၉ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်သေဆုံးမှုတ ဟာ အခုအခါမှာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၉၅ ခန့်မှာ လူပေါင်း၃သိန်း ကျော်ကကူးစက်ခံနေရပါပြီး လူတစ်သောင်းခြောက်ထောင်နီးပါး သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ အင်္ဂလန် က ပြန်လာသူနှစ်ဉီးနဲ့ အမေရိကန်က ပြန်လာသူ တစ်ဉီးတို့မှာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကိုဗစ် ၁၉ ကူးစက်ခံနေရ ကြောင်း ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာန ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ယနေ့အထိတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ် ၁၉ ကြောင့်သေဆုံးသူ မရှိသေးပါဘူး။
ဒါပေမယ့် မြန်မာအစိုးရ ဟာ မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့ ကစပြီးမြန်မာနိုင်၍ ဝင်လာတဲ့ခရီးသွားတွေကို ကန့်သတ်မှုတွေ စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းနဲ့ မလေးရှားဘက်က နေ နယ်စပ်ကနေ တစ်ဆင့်ပြန်ဝင် လာသူတွေကိတော့
อัลบั้มภาพ မြန်မာနိုင်ငံ ဝင်လာသူအားလုံးကို ၁၄ ရက်စောင့်ကြည့်မယ်